MEPỤTA MA HAZIE AHA NCHEKWA NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Mgbe ị na - arụ ọrụ na igwe windo VirtualBox (ebe a - VB), ọ na - adịkarị mkpa iji gbanwee ozi dị n'etiti isi os na VM n'onwe ya.
Enwere ike ịrụ ọrụ a site na iji nchekwa nchekwa. A na-eche na PC na-agba ọsọ Windows OS ma tinye osụ os os.
Banyere akọrọ nchekwa
Ndị nchekwa nke ụdị a na-enye mma nke ịrụ ọrụ na VirtualBox VM. Nhọrọ dị mfe bụ iji mepụta maka VM ọ bụla dịka ndekọ dị iche iche nke ga-eje ozi iji gbanwee data n'etiti PC arụmọrụ na OS os.
Kedu ka e si kee ha?
Mbụ ị chọrọ ịmepụta nchekwa dị na Osisi isi. Usoro n'onwe ya bụ ọkọlọtọ - n'ihi na a na-eji iwu ahụ eme ihe. "Mepụta" na ndokwa menu Onye nduzi.
Na ndekọ a, onye ọrụ nwere ike ịde faịlụ site na os ndị isi ma rụọ ọrụ ndị ọzọ na ha (kwagharịa ma ọ bụ detuo) iji nweta ohere ha na VM. Tụkwasị na nke ahụ, faịlụ ndị e kere na VM ma tinye na listi òkè nwere ike ịnweta site na sistemụ arụmọrụ kachasị.
Dịka ọmụmaatụ, mepụta folda na os. Aha ya ka mma iji mee ka o di mfe. Enweghi ike iji nweta ohere - ọ bụ ọkọlọtọ, na-enweghị òkè na-emeghe. Na mgbakwunye, kama ịmepụta ọhụụ ọhụrụ, ịnwere ike iji ndekọ ahụ e mere na mbụ - enweghị ihe dị iche n'ebe a, ihe ga-esi na ya pụta bụ otu.
Mgbe ịmepụtara nchekwa dị na isi os, gaa VM. N'ebe a, ọ ga-abụ nhazi zuru ezu. Mgbe ị malitere igwe mebere, họrọ na nchịkọta nhọrọ "Machine"ọzọ "Njirimara".
VM Njirimara windo ga-apụta na ihuenyo. Push "Nkọkọta Ekekọrịta" (nhọrọ a dị n'aka ekpe, na ala nke ndepụta). Mgbe ịpị, bọtịnụ ahụ kwesịrị ịgbanwe agba ya na-acha anụnụ anụnụ, nke pụtara ịmalite ya.
Pịa na akara ngosi ịgbakwunye nchekwa ọhụrụ.
Igosipụta Mgbakwunye Gbakwunye na-egosi. Mepee ndepụta ndetu ma pịa "Ndị ọzọ".
Na windo nchịkọta folda nke gosipụtara mgbe nke a gasịrị, ịchọrọ ịchọta folda nkekọrịta, nke, dịka ị na-echeta, e kere n'oge gara aga na sistemụ arụmọrụ kachasị. Ikwesiri igodo ya ma kwado nhọrọ gi site na ịpị "OK".
Window na-egosi na-akpaghị aka na-egosipụta aha na ọnọdụ nke ndekọ a họọrọ. A ga-edozi ọnụọgụ nke ikpeazụ ahụ.
A ga-ahụ faịlụ nchekwa ahụ ekekọrịtara na ngalaba a. "Njikọ Network" Explorer. Iji mee nke a, na mpaghara a, ịchọrọ ịhọrọ "Network"ọzọ VBOXSVR. Na Explorer, ị nwere ike ịhụ naanị folda ahụ, ma rụọkwa ya.
Iwe nchekwa oge
VM nwere ndepụta nke nchekwa nchekwa. Ihe ndị a gụnyere Ngwaọrụ igwe ma "Nchekwa obere oge". Oge nke ịdị adị nke ndekọ edepụtara na VB bụ njikọ chiri anya na ebe ọ ga-adị.
Ntọala ahụ e kere eke ga-adị naanị ruo oge mgbe onye ọrụ ahụ mechiri VM. Mgbe a meghere nke ikpeazụ, nchekwa ahụ agaghịzi apụta - a ga-ehichapụ ya. Ị ga-achọ ịmeghachi ya ma nweta ohere.
Gịnị mere nke a ji eme? Ihe kpatara ya bụ na e kere nchekwa a ka ọ bụrụ nwa oge. Mgbe VM kwụsịrị ịrụ ọrụ, a ga-ehichapụ ya na mpaghara nchekwa nchekwa oge. N'ihi ya, a gaghị ahụ ya na Explorer.
Anyị na-agbakwunye na n'ụzọ dịka a kọwara n'elu, onye nwere ike ịnweta ọ bụghị naanị na nkịtị, kamakwa na nchekwa ọ bụla na isi sistemụ arụmọrụ (ọ bụrụ na a gaghị egbochi nke a maka ihe nchekwa). Otú ọ dị, ohere a na-adịru nwa oge, nke dị naanị maka oge nke igwe arụmọrụ.
Otu esi ejikọ ma hazie nchekwa nchekwa na-adịgide adịgide
Ịmepụta nchekwa na-adịgide adịgide na-egosi ịmepụta ya. Mgbe ị na-agbakwunye nchekwa, rụọ ọrụ ahụ "Mepụta nchekwa nchekwa" ma gosi nhọrọ ahụ site na ịpị "OK". Mgbe nke a gasịrị, a ga-ahụ ya na ndepụta nke constants. Ị nwere ike ịchọta ya "Njikọ Network" Exploreryana ịgbaso ụzọ ụzọ menu - Mgbata Network. A ga-echekwa nchekwa ahụ ma hụ oge ọ bụla ị malitere VM. Ihe niile dị n'ime ya ga-anọgide.
Otu esi edebe nchekwa VB
Na VirtualBox, ịmepụta nchekwa nkekọrịta na ijikwa ya abụghị ọrụ siri ike. Ị nwere ike ime mgbanwe na ya ma ọ bụ wepu ya site na ịpị aha ya na bọtịnụ aka nri na ịhọrọ nhọrọ kwekọrọ na menu nke gosipụtara.
O nwekwara ike ịgbanwe nkọwa nke nchekwa ahụ. Nke ahụ bụ, iji mee ya na-adịgide adịgide maọbụ na-adịru nwa oge, melite njikọ akpaka, tinye àgwà "Naanị gụọ", gbanwee aha na ebe.
Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ahụ "Naanị gụọ"mgbe ahụ, ọ ga - ekwe omume itinye faịlụ na ya ma rụọ ọrụ na data dị na ya nanị site na sistemụ arụmọrụ kachasị. Site na VM ime nke a n'ọnọdụ a agaghị ekwe omume. Mpempe akwụkwọ ndị a ga-ahụ na ngalaba ahụ "Nchekwa obere oge".
Mgbe arụ ọrụ "Jikọọ Jikọọ" site na igba egbe ọ bụla, igwe na-emepụta nke ọma ga-agbali ịbanye na nchekwa ahụ. Mana, nke a apụtaghị na njikọ ahụ nwere ike ịmebe.
Na-arụ ọrụ ihe "Mepụta nchekwa nchekwa", anyị mepụtara nchekwa kwesịrị ekwesị maka VM, nke a ga-echekwa na ndepụta nke nchekwa nchekwa. Ọ bụrụ na ịhọrọghị ihe ọ bụla, mgbe ahụ ọ ga-adị na nchekwa nchekwa nke VM.
Nke a mezue ọrụ na ịmepụta ma hazie nchekwa nchekwa. Usoro ahụ dị nnọọ mfe, ọ dịghị achọ nkà pụrụ iche na ihe ọmụma.
Okwesiri iburu n'uche na ichoro ndi ozo site na igwe di iche iche nke oma. Echefula banyere nchekwa.